तिमि कति पटमुर्ख छौ रमेश खरेल, किन दिन्छौ राजीनामा ? « Naya Bato
तिमि कति पटमुर्ख छौ रमेश खरेल, किन दिन्छौ राजीनामा ?
प्रवास – तिमि कति पटमुर्ख छौ रमेश खरेल । इमान्दार सिपाही भएर देशको सेवा गर्न खोज्नु नै तिम्रो भुल हो । तिमीले राजनीति गर्न नजान्नु अर्थात राजनेताको पाउ मल्न नसक्नु तिम्रो कमजोरी हो ।
पटमुर्ख खरेल ? तिमीलाई यत्ति पनि थाहा छैन कि यो देशको प्रधानमन्त्री हुन् भारतीय प्रभु द्वारा आशिर्वाद लिनु पर्छ, अनि गुलाम गरे बाफत अन्डर एसेलसी वालाहरु विज्ञानमा पीएचडीको मानार्थ उपाधि पाउछन्, भने तिमीले आफ्नै देशका भरौटेहरुको गुलाम गर्न किन लाज मानेको ?
कुर्सि र पदका लागि देशका नदीनालाहरु संग सौदाबाजी गर्नेहरु तिम्रै देशका शक्तिशाली नेता छन् । तिनै कहाँ ब्रिफकेस बोकेर तिमि जान किन अनैतिक ठान्छौ ? अनैतिक संयन्त्रका पहरेदारहरु संग तिम्रो नैतिकता निरिहता छ भन्ने कुरा किन बुझ्दैनौ मुर्ख खरेल ?
अरुको गुलाम गर्नेहरुको पाउ नछुनु तिम्रो ठुलो गल्ति हो । यो देशका देशभक्तहरु अरुको गुलाम गर्ने र चम्चे बन्ने पद्दतिलाई तिमीले बुझेर पनि बुझपचाउनु तिम्रो बचपना हो । त्यसै त हाम्रो नेपालमा सिधा औलाले घिउ कहिलै निक्लिदैन, औला घुमाउनै पर्छ रे । तिमि बस्ने काठमाडौंको खाल्डोमा ठाडीएको सिहदरबारले भनेको हो ।
मुर्ख खरेल ! अहिले सम्म सिहदरबारलाई बुझ्ने चेष्टा किन नगरेको अनि भन्दै छौ ‘आईजीपी बन्ने उद्देश्यअनुसार प्रहरी सेवामा लागे पनि सरकारले पद्धति मिचेर मलाई रोकिदियो । ‘म आईजीपी बन्ने मिसनअनुसार लागेको थिएँ । तर, अब ह्युमलेट भएर काम गर्न सकिँदैन,’ ।
थुईक्क तिम्रो बुद्धि ? आईजीपी बन्नु नै छ भने अब एउटा बलियो हात्ती पार्टी समाउ । पार्टीको पनि धेरैको दिमाग भुटेर बहुमत गुट बनाउने नेता चुन । तिनको इशारामा नाँच । इमान्दारीको तक्मा अहिले देखि नै फुकालेर फाल, अनि गुटबन्दीमा दरो साथ् देउ । दलाली संयन्त्रलाई जति ठुलो पहुँचमा पुर्याउन सकेउ त्यति चाँडो तिमीले चाहेको सपना पुरा हुनेछ ।
नत्र तिमि बाँचुन्जेल देशका लागि केहि काम गर्छु भन्छौ भने ह्युमलेट भएर काम गर्नु पर्ने छ । निराशाको महल भित्र गुम्सिएर मर्नु पर्ने छ । राजिनामा दिएर निरिह हुनुपर्ने छ ।
तिमि भन्छौ मुद्दा मामिला नगर्ने र बाहिरै बसेर प्रहरीलाई सघाउने । आफ्नो मिसन र भिजनअनुसार काम गर्न नपाउने भएपछि जागिरमात्र खाएर बस्नु उपयुक्त नहुने रे सिहदरबारको भाषामा यो त झनै पाखे कुरा गरेउ, यो उभो लाग्ने कुरा होइन ।
अब राजिनामा दिएर चुपचाप बस्ने व्यार्थ कुरा नगर, आजैका मिति देखि प्रण गर कि, यदि यो देशको भलाई गर्छु भन्ने हिम्मत अझै ज्युदै छ भने सिहदरबारको कुटनीति लाई अंगाल । दलाली ताण्डवनृत्यमा सामेल हौ । चाप्लुसीको भजन मण्डलीमा सहभागी हौ । कुकार्यलाइ आफ्नो सिद्दान्त बनाउ । गुलामी प्रति कर्मठ बन ।
अनि यत्ति गर्दानी तिम्रो सपना पुरा भएन भने मेरो मुखमा थुकिदिनु ।
जय चम्चे ! जय चाप्लुसी !!
कुल सरगम /प्रबासबाट